दक्षिण काेरियामा अवैधरुपमा बसाेबास गर्ने विदेशीकाे संख्या बढ्यो ! « Bagmati Online
हेटौंडामा राप्रपाका सिंहले गठबन्धनलाई उछिने
बागमतीमा गठबन्धनको अग्रता कायमै, यस्तो छ पछिल्लो मत परिणाम
हेटौंडामा एकीकृत समाजवादीको अग्रता कायमै, पछ्याउँदै राप्रपा
तीव्र गतिमा लौरो, सुस्त गतिमा घाम, यस्तो छ काठमाडौंको पछिल्लो मत परिणाम
ललितपुरमा एमालेलाई तेब्बर मतले पराजित गरेर समाजवादीका उम्मेदवार विजयी
दक्षिण काेरियामा अवैधरुपमा बसाेबास गर्ने विदेशीकाे संख्या बढ्यो !
दक्षिण कोरियामा अवैध रूपमा बसोबास गर्ने विदेशीहरूको दर यस वर्ष सर्वाधिक उच्च रेकर्डमा पुगेको छ । प्रवासी कामदार र यात्रुहरु कोरोना महामारीको कारण ओभर स्टेमा रहेको तथ्यांक सार्वजनिक भएसँगै यस्तो तथ्यांक बाहिर आएको हो ।
कोरिया इमिग्रेशन सर्भिसले जारी गरेको तथ्यांकका अनुसार अप्रिलमा सब भन्दा बढी भिसा लिने विदेशीहरूको दर १९.७ प्रतिशत रहेको छ जुन अहिले सम्मको सबैभन्दा उच्च रेकर्ड हो । गत जनवरीमा १६.३ प्रतिशतमा रहेको दर गत जुलाई भन्दा यसपटक लगातार बढेको छ । गते अप्रिल २०२० मा १८ प्रतिशतमा पुगेको ओभर स्टेमा रहेने दर महामारीको छालसँगै बढ्दै छ ।
गैरकानुनी रूपमा बसोबास गर्ने विदेशीको संख्या घट्ने कुनै संकेत देखाएको छैन । गत जुनमा कोरियाले स्वेच्छाले कोरिया छाड्न चाहने गैरकानुनी रूपमा बसेका विदेशीहरुलाई जरिवाना र प्रवेश प्रतिबन्धबाट छुट दिइएको थियो । यसका साथै स्वैच्छिक रूपमा देश छाड्न चाहने आप्रवासीहरूलाई पनि सरकारलाई पूर्व सूचना दिन अनलाइन प्रणाली प्रयोग गर्न अनुमति दिइयो । यद्यपि गैरकानुनी रूपमा बसोबास गर्ने विदेशीको संख्या अझै घटेको छैन।
प्रकाशित मिति : २०७८ जेष्ठ १६ गते आइतवार
यूएईका राष्ट्रपति शेख खलिफा बिन जायदको निधन, ४० दिनसम्म शाेक मनाइने
सपथ लिँदै दक्षिण कोरियाका नवनिर्वाचित राष्ट्रपतिले गरे कोरियन प्रान्तलाई शान्त राख्ने वाचा
जजिरा एयरवेजले कतारको दोहाबाट पनि गौतमबुद्ध विमानस्थलमा नियमित उडान भर्ने
जापानको निजी क्षेत्रले नेपाली कामदार लैजान सीप तथा भाषा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने
जेठ २ देखि जजिरा एयरलाइन्सले गौतमबुद्ध विमानस्थलमा हवाई सेवा सुरू गर्ने
अहिले गठबन्धनकै पक्षमा जनलहर छ महालक्ष्मीमा मेयर,उपमेयर दुबै जित्छौ: शिव कट्टेल